တနင်္ဂနွေ နေ့ သားသမီး အတွက် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
သင်ဒီနှစ်ထဲမှာ အိုးပိုင်၊ အိမ်ပိုင်မရှိသေးရင် အိုးပိုင်၊ အိမ်ပိုင်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ရင်လည်း အိမ်နေရာပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းတိုးတက်ခြင်း၊ ရာထူးတိုးတက်ခြင်းမျိုး ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ခါတိုင်းနှစ်နဲ့မတူဘဲ သင်သည်သင့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တန်ခိုးသြဇာတွေ မြင့်တက်လာမယ်။ ကောင်းသော ဂုဏ်သတင်းတွေနဲ့ ကျော်ကြားလာမယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေကိုလ�
သင်ဒီနှစ်ထဲမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက် ငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်။ အမွေတွေဘာတွေ ရစရာရှိရင် ဒီနှစ်ထဲမှာ ရတတ်တာပေါ့။ ငွေလည်းစုဆောင်းမိနိုင်တာပေါ့။ တစ်ခုပဲ သတိထားရမယ်။ တစ်ချီထဲ အပွကြံတာမျိုးတော့ မလုပ်နဲ့။ လုပ်ရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့၊ ထီတွေဘာတွေလည်း ပေါက်တတ်ပါတယ်။ ဝါသနာပါရင် တနင်္လာနေ့(၁၁) နာရီတိတိမှာ ရှေ့က (၇၇) နှစ်လုံးပူးတဲ့ ထီမျိုးထိုးရမယ်။
သင် . . . ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ လက်အောက်ငယ်သားများ၏ ဆန့်ကျင်တော်လှန်မှုတွေကိုယ် ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းတွေမှာ အခက်အခဲတွေ တွေ့ရမယ်။ မမျှော်လင့်ဘဲ စိတ်ညစ်စရာတွေ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်ကိုယ်လည်း စိတ်မဝင်စားတော့ပဲ စိတ်လေနေတတ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးမကောင်းပါ။ စီးပွားတတ်တော့မလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်းကုန်သွားတတ်ပါတယ်။ အဖြစ်ထက် အပျက်ဖက်က ပိုများ�
သင်မမျှော်လင့်ဘဲ ဒီနှစ်ထဲမှာ အမှုအခင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းစရာ ပြဿနာတွေ ပေါ်တတ်ပါတယ်။ မနာလိုတဲ့သူတွေလုပ်လို့ လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ကျမ်းမာရေးလည်း ညံ့တတ်တယ်။
ပြီးတော့ ဒီနှစ်မှာ နားရတယ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ အလုပ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု လုပ်နေရလို့ အလွန့်ကို ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်။
သင် . . . ဒီနှစ်ထဲမှာ အညံ့အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတာလည်း အခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့လိမ့်မယ်။ အလုပ်ကလည်း ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်နေတတ်သည်။ ကျိန်းသေအောင်မြင် ဖြစ်ထွန်းမည့် အရာတွေနဲ့လည်း လွဲချော်နေတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးလည်း ညံ့တတ်ပါတယ်။
ဒုက္ခတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရောက်လာတတ်တယ်။ သောကြာသားသမီးတစ်ယောက် သင့်အိမ်မှာ ညအိပ်တည်း ခိုလိုက်ရင်တော့ အဲဒီဒုက္ခတွေက လွတ်သွားလိမ�
သင် . . . ဒီနှစ်မှာ ကံဇာတာကောင်းတယ်လို့လည်း မပြောနိုင်ပါဘူး။
ဘာပဲလုပ်လုပ် အပင်ပန်းခံရသလောက် အကျိုးမရှိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဟိုဟာလုပ်ရမလို၊ ဒီဟာလုပ်ရမလိုနဲ့ အချိန်ကုန်သွားတတ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေလည်း တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်။
ငွေတွေလည်း ဝင်စရာရှိတာ မဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်နေမည်။ လုပ်နေကျ လုပ်ငန်းကိုရပ်ပြီး လုပ်ငန်းအသစ် ပြောင်းလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးပေါ်မယ်။ မလုပ်ပါနဲ
သင် . . . ဒီနှစ်မှာ သင့်ကို မလေးစားတဲ့သူတွေကတောင် ကြည်ညိုလေးစား လာကြလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်ဟာ ကံကောင်းတဲ့နှစ်လို့ ဆိုရလိမ့်မယ်။
ကိုယ်က ဖြစ်သလို ဝတ်စားတာကို ဘေးလူက ကြည့်လို့ကောင်းနေတတ်တယ်။ ထမင်းစားတဲ့ အခါလည်း ဟင်းကောင်းဖို့မလိုဘူး။ ဘာနဲ့ပဲ စားရစားရ ထမင်းမြိန်နေတတ်တယ်။ ကံကောင်းနေပြီကိုး။
ကိုယ်က တစ်လွဲအကြံပေးလိုက်တယ်။ လုပ်တဲ့သူကလည်း လိုက်ပြီးလုပ်တယ်။ သူ့ဟ�
သင်သည် ဒီနှစ်မှာ သင့်အတွက် ကံကောင်းတဲ့နှစ် တစ်နှစ်ပါပဲ။ ခရီးဝေး၊ ခရီးနီး နှစ်မျိုးစလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သွားရတတ်သည်။ ရာထူးတွေလည်း တိုးလိမ့်မည်။ ဆုံးမလို ဖြစ်နေသော ပစ္စည်းတွေလည်း ပြန်ရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းသစ်တွေ၊ အဝတ်အစားသစ်တွေလည်း ဝင်လာလိမ့်မည်။ ခါတိုင်းနှစ်နဲ့မတူပါ။ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေလည်း တိုးတက်လိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးရှင်တွေ မိဘတွေကိုလည်း ပြန်ပြီး ကြည့်နိုင်
တနလာင်္ နေ့ သားသမီး အတွက် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
သင်ဒီနှစ်ထဲမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက် ငွေတွေ ဝင်လာတတ်တယ်။ အမွေတွေ ဘာတွေရစရာရှိရင် ဒီနှစ်ထဲမှာ ရမယ်။ ငွေလည်း စုဆောင်းမိနိုင်မယ်။ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့လူများကတော့ သတိထားရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒီနှစ်ဟာ မျက်နှာပွင့်တယ်။ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး အိမ်ကို ရောက်လာပြီး ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ အရင့်အရင်က ကိုယ်နဲ့မသင့်မြတ်သူတွေနဲ့ ပြန်ပြီး သင့်မြတ်တတ်တယ်။ ဒ�
သင် . . . ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ အိမ်မှာနေရတာကို မပျော်ပိုက်ဘဲ ရှိလိမ့်မယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မြည်တွန်တောက်တီးစရာတွေ ပေါ်နေလိမ့်မယ်။
မနက်စောစောထပြီး သမ္မာဒေဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကို မေတ္တာပို့ပေးပါ။ သူတို့က နိမိတ်ကောင်းတွေ ပေးရင်တော့ အညံ့တွေပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းရေးလည်း မသာမယာဖြစ် တတ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်အတွင်းမှ မိတ်ဆွေဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ လက်အောက်ငယ်သာ�
သင် . . . မမျှော်လင့်ဘဲ ဒီနှစ်ထဲမှာ အမှုအခင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းစရာ ပြဿနာတွေ ပေါ်တတ်တယ်။ မနာလိုတဲ့သူတွေလုပ်လို့ လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ငွေကြေးတွေလည်း ဆုံးပါးတတ်တယ်။ ဘယ်လိုအရသာရှိတဲ့ အစားအသောက်ကိုပဲ စားစားခံတွင်းမတွေ့ဘဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အိမ်ကပစ္စည်းတွေ ချရောင်းရတဲ့အထိငွေ ပြတ်သွားတတ်တယ်။
သင် . . . ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ညံ့လို့ ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းတွေ ကုန်ကျခဲ့မယ်။ ကျန်တာလေးတွေ ဒီနှစ်ထဲမှာ ထပ်ပြီး ကုန်သွားလိမ့်မယ်။ ကံဇာတာညံ့နေတယ်။ အထူးသတိထားပါ။
သူတစ်ပါးက သင့်ကို အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ပြီး အကျိုးမဲ့အောင် ပြုလုပ်လိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ မကောင်းသတင်းလည်း လွှင့်တတ်ပါသေးတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသခံရဖို့ကိန်းတွေ ကြုံတတ်တယ်။ ရုတ်တရက် လေအောင့်တာတို့ ဘာတို့ ဖြစ်တတ်�
သင် . . . ဒီနှစ်ကံဇာတာက ဘာမှမလုပ်ဘဲနေရင် နည်းနည်း သက်သာမယ်။ လုပ်တတ်လို့ လျှောက်ပြီးလုပ်ရင်တော့ လုပ်လေ ကုန်လေဖြစ်မှာပဲ။
ဒီနှစ်ဟာလည်း ကံဇာတာကောင်းတယ်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အပင်ပန်းခံရသလောက် အကျိုးမရှိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဟိုဟာလုပ်ရမလို၊ ဒီဟာလုပ်ရ မလိုနဲ့ အချိန်ကုန်သွားတတ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေလည်း တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
သင် . . . တစ်ခုအကြံပေးချင်တာက ဒီလိုကံကောင်းတဲ့နှစ်မှာ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်ကြိုးစားပြီးလုပ်ပါ။ ဘယ်အသင်းအဖွဲ့မှ မဝင်ပါနဲ့။ အချိန်ဖြုန်းသလို လုပ်ရတဲ့ ကျားထိုးတာတို့ ချက်ထိုးတာတို့ ဘောလုံးပွဲကြည့်တာတို့ မလုပ်ပါနဲ့။ မုချ ချမ်းသာမယ့်နှစ်ဖြစ်မယ်။ ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် အကျိုးရှိမှာ ဖြစ်တယ်။
မမျှော်လင့်တဲ့ဆီက ငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်။ ဆုံးပြီလို့ထင်တဲ့ငွေ တြွေ�
သင်သည် ခါတိုင်းနှစ်နဲ့မတူပါ။ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေလည်း တိုးတက်လိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးရှင်တွေ မိဘတွေကိုလည်း ပြန်ပြီး ကြည့်နိုင်လိမ့်မယ်။ ငွေတွေကလည်း ဝင်လာမှာ တသောသောပါပဲ။ စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ ပြည့်စုံမယ့်နှစ်ပါပဲ။ ဒီနှစ်ကတော့ စိတ်တိုင်းကျ ကောင်းမည့်နှစ်ပါ။ စက်တွေ စိန်တွေလည်း ဝင်တတ်တယ်။
မိတ်ဆွေ ဒီနှစ်မှာ သင့်အတွက် ကံကောင်းတဲ့နှစ် တစ်နှစ်ပါပဲ။ ခရီးဝေး၊ ခရီးနီး နှစ်�
သင်ဒီနှစ်ထဲမှာ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
လုပ်ငန်းတိုးတက်တာမျိုး၊ ရာထူးတိုးတက်တာမျိုး ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေ မစတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့ မုဆိုးမဧည့်သည် ညအိပ်လက်ခံမိလျှင် မမျှော်လင့်ဘဲ အမှုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုကံကောင်းတဲ့ နှစ်မျိုး�
အဂါင်္ နေ့ သားသမီး အတွက် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
သင် . . . ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ ညံ့နေတဲ့အထဲကနေပြီး မြေတွေဘာတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာ သင်ဟာ အိမ်မှာနေရတာကို မပျော်ပိုက်ဘဲ ရှိလိမ့်မယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မြည်တွန်တောက်တီးစရာတွေ ပေါ်နေလိမ့်မယ်။
သူတစ်ပါးအတွက် အာမခံတာမျိုး၊ ကိုယ်စားလိုက်ပြီးပြောတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။
ဒီနှစ်အတွင်းမှ မိတ်ဆွေဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ လက်အောက်ငယ်သားများရဲ့ ဆန်
သင် . . . ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ သူတစ်ပါးက သင့်ကို အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ပြီး အကျိုးမဲ့အောင် ပြုလုပ်တတ်တယ်။ ပြီးတော့ မကောင်းသတင်းလည်း လွှင့်တတ်ပါသေးတယ်။
ရပ်ဝေးက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ကိုယ့်ဆီမှာလာပြီး တည်းတတ်တယ်။ ပြီးတော့ ရုတ်တရက် ကျန်းမာရေး ညံ့ပြီး ဆုံးပါးတတ်ပါတယ်။ လက်မခံရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အလုပ်အကိုင် ထိခိုက်တတ်တယ်။ အိမ်သားတွေလည်း တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကျန�
သင် . . . ဒီအသက်ပိုင်းမှာ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အိမ်မှာသုံးတဲ့ ရေပိုက်၊ ရေကန်တွေ ပြုပြင်ရတတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်နဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ ကိုယ်နေတဲ့ လမ်းထဲမှာ အသုဘပေါ်တတ်ပါတယ်။
အဲဒီ နိမိတ်တွေ့ပြီးရင် သင်ဟာ ခရီးထွက်ရလိမ့်မယ်။ ခရီးထွက်ပြီးလို့ ပြန်လာရင်တော့ သင့်ရဲ့ ညံ့နေတဲ့ကံတွေ ကောင်းသွားပြီလို့ ယူဆပါ။
လုပ်နေကျ လုပ်ငန်းကိုရပ်ပြီး လုပ
ကိုယ်က အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ ကိုယ့်မှာ ငွေမရှိဘူး။ ငွေရှိတဲ့သူက သူ့ငွေတွေကို ယူပြီးလုပ်ပါ။ ပေးချင်တဲ့အခ�
သင်ဟာ ဒီနှစ်မှာ စိတ်တိုင်းကျ ကောင်းမဲ့နှစ်ပါပဲ။ မင်္ဂလာကိစ္စတွေလည်း ဆောင်ရွက်ပေးရတတ်တယ်။ လွတ်လပ်ပြီး အရွယ်ရောက်သူ ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါတယ်။
ခါတိုင်းနှစ်နဲ့မတူပါ။ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေလည်း တိုးတက်လိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးရှင်တွေ မိဘတွေကိုလည်း ပြန်ပြီး ကြည့်နိုင်လိမ့်မယ်။ ငွေတွေကလည်း ဝင်လာမှာ တသောသောပါပဲ။ စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ ပြည့်စုံမည့်နှစ်ပါပဲ။
ဘုရားဖူးထွက်တာမျိုး၊ အလှူအတန်းကိစ္စအတွက် ခရီးထွက်တာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးခရီး၊ နိုင်ငံခြားခရီး သွားရတာမျိုးလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
သင်ပိုင်သော ပစ္စည်းတွေကိုတော့ သတိထားပြီး သိမ်းဆည်းပါ။ ဒီနှစ်မှာ သူခိုးခိုးခံရ တတ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုကံကောင်းတဲ့နှစ်မျိုးမှာ သူများလာအပ်တဲ့ ပစ
သင် ဒီနှစ်ထဲမှာ ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာတွေပဲ ကြုံကြုံ တစ်ခါတည်းနဲ့ မပြီးဘူး၊ နှစ်ခါနှစ်ခါ ထပ်ပြီး ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။
မိတ်ဆွေ . . . ဒီနှစ်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက် ငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်။ အမွေတွေ ဘာတွေ ရစရာရှိရင် ဒီနှစ်ထဲမှာ ရမယ်။ ငွေလည်း စုဆောင်းမိနိုင်တာပေါ့။ တစ်ခုပဲ သတိထားရမယ်။
တစ်ချီတည်း အပွကြံတာမျိုး၊ အကောက်ကြံတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ လုပ်ရင်တော့ မကော�
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ သားသမီး အတွက် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
သင် . . . ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ သွားကိုက်သွားနာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
မရောက်ဖူး မသွားဖူးသောခရီးကို ရုတ်တရက် သွားရတတ်ပါတယ်။
ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ ကိုယ့်ဆီက ထွက်သွားပြီး ကိုယ်နဲ့ မတည့်တဲ့သူဆီကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရှိရင်လည်း တကျက်ကျက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကာမဂုဏ်စိတ် ကုန်ခမ်းသွားတတ်တယ်။
သင် . . . ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ ရပ်ဝေးက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ကိုယ့်ဆီမှာလာပြီး တည်းတတ်တယ်။ ပြီးတော့ ရုတ်တရက် ကျန်းမာရေး ညံ့ပြီး ဆုံးပါးတတ်ပါတယ်။ လက်မခံရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဒီနှစ်ထဲမှာ အညံ့အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတာလည်း အခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့လိမ့်မယ်။ အလုပ်ကလည်း ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ ကျိန်းသေအောင်မြင် ဖြစ်ထွန်းမည့် အရာတွေနဲ့လည်း လွဲချော်နေတတ်တယ်�
အိမ်ကို ဘိုးတော်လိုလို၊ ဘာလိုလိုနဲ့ ညာတဲ့လူတွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ မယုံပါနဲ့။ ပါသွားလိမ့်မယ်။
ဒီနှစ်ဟာလည်း ကံဇာတာကောင်းတယ်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အပင်ပန်းခံရသလောက် အကျိုးမရှိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဟိုဟာလုပ်ရမလို၊ ဒီဟာလုပ်ရ မလိုနဲ့ အချိန်ကုန်သွားတတ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေလည်း တစ်ပိုင်းတစ်စ�
သင် . . . ဟာ ဒီအသက်ပိုင်းမှာ မမျှော်လင့်တဲ့ဆီက ငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်။ ဆုံးပြီလို့ထင်တဲ့ ငွေတွေပြန်ရတတ်တယ်။ အလှူလုပ်ရတတ်တယ်။ လုပ်ရမယ့် အလှူကလည်း ရည်ရွယ်တုန်းကသေးသေး၊ တကယ်လုပ်တော့ ကြီးသွားလိမ့်မယ်။
ကားပိုင်မရှိသေးရင်တော့ ကားပိုင်ရလိမ့်မယ်။ ပထမရတဲ့ကားကတော့ မကြာခဏပျက် လိမ့်မယ်။ အဲဒီပျက်တဲ့ကားကိုလဲပြီး နောက်ရမယ့် ကားကျမှ အကောင်းစီးရမှာနော်။ ကားရှိပြီးသားဆ�
သင်ဟာ ဒီအသက်ပိုင်းမှာ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အထက်လူကြီး၊ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်း ကြည့်လိမ့်မယ်။ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်း ရလိမ့်မယ်။ ရာထူးကြီးတွေ မြင့်တက်သွားမယ်။ မင်္ဂလာကိစ္စတွေလည်း ဆောင်ရွက်ပေးရတတ်တယ်။ လွတ်လပ်ပြီး အရွယ်ရောက်သူဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါတယ်။
ခါတိုင်းနှစ်နဲ့မတူပါ။ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေလည်း တိုးတက်လိမ့်မယ်�
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနှစ်ဟာ သင့်အဖို့ ကံကောင်းတဲ့နှစ်လို့ ယူဆပါ။ မပြည့်စုံတာတွေ ပြည့်စုံလာမယ်။ ဖြစ်ချင်တာတွေ မုချဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ အကြံကောင်းတစ်ခုပေးချင်တာကတော့ မကြာမကြာ သတ်သတ်လွတ် စားပေးပါ။
ငွေတွေကတော့ ဒလဟောဝင်နေလိမ့်မယ်။ ထွက်တာတွေလည်း အရမ်းထွက်နေလိမ့်မယ်။ သင်ပိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုတော့ သ
သင် ဒီအသက်ပိုင်းမှာ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအိမ်ကို ရောက်လာပြီး ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေ . . . ဒီနှစ်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက် ငွေတွေ ဝင်လာတတ်တယ်။ အမွေတွေ ဘာတွေ ရစရာရှိရင် ဒီနှစ်ထဲမှာ ရမည်။ ငွေလည်း စုဆောင်းမိနိုင်တာပေါ့။ တစ်ခုပဲ သတိထားရမယ်။ တစ်ချီတည်း အပွကြံတာမျိုး၊ အကောက်ကြံတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ လုပ်ရင်တော�
သင် . . . ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ သူတစ်ပါးအတွက် အာမခံတာမျိုး၊ ကိုယ်စားလိုက်ပြီးပြောတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ ညံ့နေတဲ့ အထဲကနေပြီး မြေတွေဘာတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မျိုးမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ အမှုအခင်းတွေ ဘာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သတိထားပါ။
ဒီနှစ်အတွင်းမှ မိတ်ဆွေဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ လက်အောက်ငယ်သားများ၏ ဆန့်ကျင်တော်လှန်မှု တွေကို ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ကြာသပတေး နေ့ သားသမီး အတွက် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
ငွေတွေလည်း ဝင်စရာရှိတာ မဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်နေမယ်။ ဒီနှစ်ကံဇာတာက ဘာမှမလုပ်ဘဲနေရင် နည်းနည်း သက်သာမယ်။ လုပ်တတ်လို့ လျှောက်ပြီး လုပ်ရင်တော့ လုပ်လေ ကုန်လေဖြစ်မှာပဲ။
လုပ်နေကျ လုပ်ငန်းကိုရပ်ပြီး လုပ်ငန်းအသစ် ပြောင်းလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးပေါ်လာတတ်တယ်။ မလုပ်ပါနဲ့လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း ပြောင်�
သင် . . . ဟာ ဒီအသက်ပိုင်းမှာ လုပ်ငန်းသစ်တွေ စရတတ်တယ်။ အလုပ်တွေအကျိုးပေး တတ်တယ်။ သေမလောက် ရောဂါခံနေရတဲ့ သူကို ကိုယ်က ကြားဖူးတဲ့ဆေးမြီးတိုကလေး ပေးလိုက်တယ်။ သူကလည်း ယုံကြည်စွာနဲ့ သောက်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ရောဂါပျောက်သွားတယ်။ ကိုယ့်ကိုလည်း ဇီဝက လောက်ထင်သွားတယ်။ ကံကောင်းနေတာကိုး။
တစ်ခုအကြံပေးချင်တာက ဒီလိုကံကောင်းတဲ့နှစ်မှာ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်ကြိုးစားပြီး လုပ်�
သင်ဟာ ဒီအသက်ပိုင်းမှာ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
မိမိမျှော်လင့် မထားတဲ့ အဆင့်အတန်းကို ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ စိတ်တိုင်းကျ ကောင်းမဲ့နှစ်ပါပဲ။
မင်္ဂလာကိစ္စတွေလည်း ဆောင်ရွက်ပေးရတတ်တယ်။ လွတ်လပ်ပြီး အရွယ်ရောက်သူဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေ . . . ဒီနှစ်ကတော့ သင့်အတွက် ကံကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။ ခရီးဝေး၊ ခရီးနီး နှစ်
လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေ မစတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့ မုဆိုးမဧည့်သည် ညအိပ်လက်ခံမိလျှင် မမျှော်လင့်ဘဲ အမှုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တစ်ခုသတိထား ရမှာက အိမ်ကို ဆရာအတုအယောင်တွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ စက်တွေ ဘာတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း သတိထားပါ။ ကြည့်တုန်းကတော့ အကောင်းပဲ။ ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှ အပျက်ဖြစ်နေတတ်တယ
ထီတွေဘာတွေလည်း ပေါက်တတ်ပါတယ်။ ဝါသနာပါရင် တနင်္လာနေ့ (၁၁) နာရီတိတိမှာ ရှေ့က (၇၇) နှစ်လုံးပူးတဲ့ ထီမျိုးထိုးရမယ်။ မျက်စိအားနည်းနေတတ်တယ်။ မျက်မှန်တပ်သူဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်မျိုးမှာ မျက်မှန်ပါဝါ တိုးသွားတတ်ပါတယ်။
သားသမီးရှိရင် သားသမီးအတွက် စိတ်သောကရောက်ရတတ်ပါတယ်။ မမျှော်လင့်ဘဲ အိမ်မှာ အလှူလုပ်
သင် . . . ဒီအသက်အပိုင်းခြားမှာ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
လက်ရှိအလုပ်ကနေ တခြားကို ပြောင်းလိုစိတ် ပေါ်တတ်ပါတယ်။ မပြောင်းပါနဲ့။ လက်ရှိအလုပ်က တော်ပါသေးတယ်။ နောက်ပြောင်းမည့်အလုပ်က သင့်ကို အကျိုးမပေးပါ။
ညံ့နေတဲ့အထဲကနေပြီး မြေတွေဘာတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။
ခါးနာတာတို့၊ ခြေထောက်နာတာတို့လည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။
သင် . . . ဒီအသက်အပိုင်းခြားမှာ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များ တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။
မိမိအိမ် ခြေရင်းဘက်မှာ အသုဘပေါ် တတ်သည်။ ပေါ်ရင်တော့ (၅) ဂဏန်းအစ ထီထိုးပေးပါ။ ထီဆုကြီး ပေါက်တတ်ပါတယ်။
ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ ဆုံးပါးတတ်တယ်။ ကိုယ်ကပေးစရာ ရှိတဲ့ငွေက ချက်ချင်းပေးရမယ်။ ရစရာရှိတဲ့ ငွေကတော့ မရဘဲ ရှိလိမ့်မယ်။
ငွေကြေးတွေလည်း ဆုံးပါးတတ်တယ်။ ဘယ်လိုအ
သင် . . . ဒီအသက်အပိုင်းအခြားမှာ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
သူတစ်ပါးက သင့်ကို အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ပြီး အကျိုးမဲ့အောင် ပြုလုပ်တတ်သည်။ ပြီးတော့ မကောင်းသတင်းလည်း လွှင့်တတ်ပါသေးတယ်။
ဒုက္ခတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရောက်လာတတ်တယ်။
သောကြာသားသမီးတစ်ယောက် သင့်အိမ်မှာ ညအိပ်တည်းခိုလိုက်ရင်တော့ အဲဒီဒုက္ခတွေက လွတ်သွားလိမ့်မယ်။
သောကြာ နေ့ သားသမီး အတွက် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
စက်တွေ စိန်တွေလည်း ဝင်တတ်တယ်။
မိမိမျှော်လင့် မထားတဲ့ အဆင့်အတန်းကို ရောက်သွားလိမ့်မယ်။
ခါတိုင်းနှစ်နဲ့ မတူပါ။ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေလည်း တိုးတက်လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးရှင်တွေ မိဘတွေကိုလည်း ပြန်ပြီး ကြည့်နိုင်လိမ့်မယ်။ ငွေတွေကလည်း ဝင်လာမှာ တသောသောပါပဲ။ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ ပြည့်စုံမည့်နှစ်�
ခါတိုင်းနှစ်နဲ့မတူပဲ သင်သည် သင့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တန်ခိုးသြဇာတွေ မြင့်တက်လာမယ်။ ကောင်းသော ဂုဏ်သတင်းတွေ ကျော်ကြားလာမယ်။
အလွန်ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေတစ်ဦးနဲ့ အထင်လွဲပြီး မုန်းသွားတတ်တယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
မိတ်ဆွေ . . . သင်ဟာ ဒီနှစ်မှာ အိုးပိုင်အိမ်ပု�
အတော့်ကို ကောင်းတဲ့နှစ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဆင်းရဲမွဲတေနေသူတွေတောင် ဒီလိုနှစ်မျိုးရောက်တဲ့ အခါမှာ အိမ်ပိုင်၊ ကားပိုင်တွေ ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။
မျက်စိအားနည်းနေတတ်တယ်။ မျက်မှန်တပ်သူဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်မျိုးမှာ မျက်မှန်ပါဝါတိုးသွားတတ်ပါတယ်။ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး အိမ်ကို ရောက်လာပြီး ဒုက္ခပေ�
စီးပွားရေး မကောင်းပါ။ စီးပွက်တက်တော့မလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်းကုန်သွားတတ်ပါတယ်။ အဖြစ်ထက် အပျက်ဘက်က ပိုများနေပါတယ်။
စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြုံရတဲ့အထဲ သွားတစ်ချောင်းကလည်း ဒုက္ခပေးပါလိမ့်ဦးမယ်။ ကိုယ့်ငွေတွေ သူများလက်ထဲ သွားပြီး မြှုပ်နေတတ်ပါတယ်။
သူတစ်ပါးအတွက် အာမခံတာမျိုး၊ ကိုယ်စားလိုက်ပြီး ပြေ
သင် ဒီအသက်ပိုင်းမှာ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ လက်အောက်ငယ်သားတပည့် တပန်းတွေ ကိုယ့်ဆီကထွက်သွားပြီး ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ သူဆီရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ ဆုံးပါးတတ်တယ်။ ပညာတစ်ခု ရလိမ့်မယ်။ ပညာထူးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကပေးစရာရှိတဲ့ငွေက ချက်ချင်းပေးရမယ်။ ရစရာရှိတဲ့ငွေကတော့ မရဘဲရှိလိမ့်မယ်။ ငွေကြေးတွေလည်း ဆုံးပါးတတ်�
အလုပ်လုပ်ရတာလည်း အခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့လိမ့်မယ်။ အလုပ်ကလည်း ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်မျိုး ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ကျိန်းသေအောင်မြင် ဖြစ်ထွန်းမည့် အရ
သင် . . . ဒီအသက်အပိုင်းမှာ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အိမ်မှာသုံးတဲ့ ရေပိုက်၊ ရေကန်တွေ ပြုပြင်ရတတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်နဲ့ မရှေးနှောင်းမှာပဲ ကိုယ်နေတဲ့ လမ်းထဲမှာ အသုဘပေါ်တတ်ပါတယ်။
မြေကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စ စကားများရတတ်�
သင် . . . ဟာ ဒီအသက်ပိုင်းမှာ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အလွန်ကောင်းတဲ့ သတင်းတစ်ခုကြားရတတ်ပါတယ်။ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေ၊ ဘုရားပုံတော်တွေ၊ အိမ်ကို ကြွလာတတ်တယ်။ အလှူလုပ်ရတတ်တယ်။ လုပ်ရမယ့် အလှူကလည်း ရည်ရွယ်တုန်းက သေးသေး၊ တကယ်လုပ်တော့ ကြီးသွားလိမ့်မယ်။
စနေ နေ့ သားသမီး အတွက် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
သင် . . . ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ ငွေတွေဘာတွေ ပျောက်တတ်တယ်။ အသက်ကို မထိခိုက်တဲ့တိုင်အောင် ကားနဲ့တော့ တိုးမိတတ်တယ်။ ပွတ်သွားတာမျိုး ခံရတတ်ပါတယ်။
အလုပ်အကိုင် ထိခိုက်တတ်တယ်။ အိမ်သားတွေလည်း တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကျန်းမာရေး ညံ့လို့ ဆေးခန်းပို့ရတတ်တယ်။
ဒုက္ခတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရောက်လာတတ်တယ်။ သောကြာသားသမီးတစ်ယောက် သင့်အိမ်မှာ ညအိပ်တည်းခိုလိုက်ရင်တော့ အဲဒီဒုက္ခတွေ
မြေကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စ စကားများရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများကတော့ သတိထားနေပါ။ အိမ်ထောင်ဘက်က ကိုယ့်ကို အထင်လွဲတတ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ကံဇာတာက ဘာမှမလုပ်ဘဲနေရင် နည်းနည်း သက်သာမယ်။ လုပ်တတ်လို့ လျှောက်ပြီး လုပ်ရင်တော့ လုပ်လေကုန်လေ ဖြစ်မှာပဲ။
အိမ်ကို ဘိုးတော်လိုလို၊ ဘာလိုလိုနဲ့ ညာတဲ့လူတွေ ရောက်လ
သင် . . . ဟာ ဒီအသက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်က တစ်လွဲအကြံပေးလိုက်တယ်။ လုပ်တဲ့သူကလည်း လိုက်ပြီးလုပ်တယ်။ သူ့ဟာနဲ့သူ အပေါက်အလမ်း တည့်သွားတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ကိုယ့်ကို ကျေးဇူးတင်တော့တာပါပဲ။ ကံကောင်းနေတော့လည်း ပြောတိုင်းဖြစ်တာပေါ့လေ။
ထမင်းစားတဲ့ အခါလည်း ဟင်းကောင်းဖို့မလိုဘူး။ ဘာနဲ့ပဲ စားရစားရ ထမင်းမြိန်နေတတ်တယ်။ ကံကောင်းနေပြီကိုး။
သေမလောက်ရောဂါ ခံနေရတဲ့သူကို ကိုယ်က �
သင် ဟာ ဒီအသက်ပိုင်းမှာ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာကိစ္စတွေလည်း ဆောင်ရွက်ပေးရ တတ်တယ်။ လွတ်လပ်ပြီး အရွယ်ရောက်သူဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါတယ်။
အထက်လူကြီး၊ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်း ကြည့်လိမ့်မယ်။ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်း ရလိမ့်မည်။ ရာထူးကြီးတွေ မြင့်တက်သွားမယ်။
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်တဲ့သူဆိုရင် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရပါလိမ့်မယ်။
အပူလောင်တတ်တယ်။ ရေနွေးအပူတို့၊ မီးအပူတို့၊ လျှပ်စစ်တွေကိုင်ရင် သတိထားပါ။ ခြေထောက်မျက်တတ်၊ နာတတ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနှစ်ဟာ သင့်အဖို့ ကံကောင်းတဲ့နှစ်လို့ ယူဆပါ။ မပြည့်စုံတာတွေ ပြည့်စုံလာမယ်။ ဖြစ်ချင်တာတွေ မုချြ
လာဘ်လာဘလည်း အလွန်ရွှင်မယ်။ လူအနေနဲ့လည်း ဒီနှစ်ထဲမှာ အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။
အဖိုးမတန်ဘူးဆိုပြီး ဘူးထဲ ခွက်ထဲမှာ ပစ်ထားတဲ့ ကျောက်ကလေးတစ်လုံးရှိနေတယ်။ ဘာကျောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အရောင်ကတော့ ခပ်ဖျော့ဖျော့ပါပဲ၊ ထိပ်မှာ အနာကလေးပါတယ်၊ အဲဒီကျောက်ကလေးကိုရှာပြီး ငွေလက်စွပ်ကွင်းပြီး မိတ်ဆွေရဲ့ လက်မှာ ဝတ်
စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြုံရတဲ့အထဲ သွားတစ်ချောင်းကလည်း ဒုက္ခပေးပါလိမ့်ဦးမယ်။ ကိုယ့်ငွေတွေ သူများလက်ထဲသွားပြီး မြှုပ်နေတတ်ပါတယ်။
လက်ရှိအလုပ်ကနေ တခြားကို ပြောင်းလိုစိတ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ မပြောင်းပါနဲ့။ လက်ရှိအလုပ်က တော်ပါသေးတယ်။ နောက်ပြောင်းမည့်အလုပ်က သင့်ကို အကျိုးမပေးပါ။
ဒီနှစ်မှာ သင်ဟာ အိ
ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက အသက်အရွယ်ကြီးသူက ဆုံးပါးတတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား တပည့်တပန်းတွေ ကိုယ့်ဆီက ထွက်သွားပြီး ကိုယ်နဲ့ မတည့်တဲ့ သူဆီရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
မိမိအိမ်ခြေရင်းဘက်မှ အသုဘပေါ်တတ်ပါသည်။ ပေါ်ရင်တော့ (၅) ဂဏန်းအစ ထီထိုးပေးပါ။ ထီဆုကြီး �